Xulka kubadda Cagta Chile oo ku Guulaystay Copa America – Radio Daljir
Luulyo 5, 2015 3:45 b 0
Axad, Luuliyo 05, 2015 (Daljir) —Xulka qaranka Chile ayaa markii taariikhdeeda ugu horaysay ku guulaysatay Copa America kadib markii ay rekoodhayaal 4:1 ah ku garaaceen Argentina. Chile iyo Argentina ayaa is mari waayay 120 daqiiqo oo ay ciyaareen taas oo ugu danbayn keentay in rekoodhayaal lagu kala saaro, waxaana koobka Copa America 4:1 ku qaaday xulka qaranka koobkan marti galinayay ee Chile.
Argentina ayaa muddo sanad ah finalkii labaad guuldaro kula kulantay.Sanchez ayaana rekoodhihii ay Chile guushu ku raacday udhaliyay isaga oo waliba si cajiib ah oo qurux badan udhaliyay.Kadib markii ay muddo 99 sano ah sugayeen ayay Chile ugu danbayn ku guulaysatay Copa America.
Xulalka qaramada Chile iyo Argentina oo iskugu soo hadhay finalka Copa America ayaa ku ku loolamayay koobka Copa America 2015. Chile oo ah dalka marti galinayay Copa America ayaa doonaysay inay soo gabagabayso muddo 99 sano ah oo ay ka faro madhnayd Copa America waxayna si wayn ugu soo diyaar garoobeen inay markii ugu horaysay qaadaan iyaga oo ka faa’iidaysanaya ciidooda hooyo oo kulankan finalka ahi ka dhacayo.
Laakiin Chile ayaa sii ogayd inay finalka la ciyaarayso xulka qaranka Argentina oo markii horeba loo saadaalinayay inay ku guulaysan karaan Copa America waxaana Argentina intaa u dheerayd murugadii guuldaradii finalkii koobkii aduunka ee Germany ay kaga qaaday Brazil, waxayna Argentina dadaalkeeda iskugu gaynaysay sidii ay guul ay ka gaadho Chile iskugu ilawsiin lahayd wixii ka soo qabsaday finalkii koobkii aduunka ee 2014kii, waxayna maanka ku hayeen xanuunka ay leedahay inaad finalka guuldaro la kulantaa.Argentina oo aan muddo 23 sano ah koob wayn ku guulaysan ayaa doonaysay inay markan nasiib wacan yeeshaan oo ay qaadaan Copa America.
Kulankan ayaa ahaa mid xiiso iyo xamaasad badan oo ay labada xul qaranba ku soo bandhigeen ciyaar weerar iyo weerar celis ah. Inkasta oo ay qaybta hore ku kala baxeen barbaro gool la’aan ah ayay haddana ciyaartu ahayd mid daqiiqad kasta gool laga filanayay.
Xulka Qaranka Chile ayaa muujiyay qaab ciyaareed aan la rumaysan karin taas oo ka dhigtay inay qabta hore ee ciyaarta muujiyaan in ayna ciyaar ciyaar ku soo gaadhin finalka Copa America.Inkasta oo ay ciyaartu ahayd mid kulul oo weerar badan ayayna haddana labada kooxood samayn fursado badan oo cadaan ah.
Laakiin Chile iyo Argentina ayaa qaybta hore helay min hal fursad oo halis ah iyada oo Chile daqiiqadii 11 aad heshay fursad gool loo fishay kadib markii uu darbo halis ah goolka Argentina ku tuuray Arturo Vidal laakiin goolhaye Romero ayaa samayey badbaadin fiican isaga oo ciyaarta ku sii hayay barbaro gool la’aan ah.
Dhinaca Argentina daqiiqadii 20 aad ayuu Sergio Aguero helay fursad dahabi ah taas oo gool loo fishay laakiin markan ayuu isaguna jawaab cad bixiyay Claudio Bravo kaas oo sameeyay badbaadin fantastik ah. Beausejour ayaa qalad ku galay Zabaleta meel goolka Chile udhaw, waxaana kuubada soo tuuray Lionel Messi oo madax u soo saaray, Augero ayaana si fiican goolka udhalinayay intii aanu Bravo badbaadin halis ah samayn.
Daqiiqadii 29 aad ayaa ciyaarta dhaawac looga saarayt Angel Di Maria oo isagu is dhaawacy kadib markii uu kubbada si aad ah ula soo orday isla markaana uu ciyaartoy Chile ahi orodkiisa ka qalday, waxaana lagu soo badalay Ezequiel Iván Lavezzi. Di Maria ayaa si fiican u ciyaarayay balse dhibtiisa ayaa ahayd inuu kubbad badan luminayay.
Inkasta oo aan ciyaartan qaybtii hore gool la’aan laga filayan marka la eego qaabka ay ciyaartu u kululayd ayay haddana qaybta hore lagu kala nastay barbaro gool la’aan ah.inkasta oo ay Chile ahayd kooxda firfir coonida ugu badan ku ciyaartay qaybta hore ayay haddna ciyaartu ahayd mid laysku dhaw yahay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay ciyaartu markale sii ahayd mid sii adkaatay iyada oo labada kooxoodba ay markan taxadar dheeraad ah ay ka muujinayeen dhinaca difaaca. Difaacyada labada kooxood ee Chile iyo Argentina ayaa si fiican iskaga ilaaliyay inay qaladadaad sameeyaan.
Laakiin intii lagu jiray daqiiqadiihii 70ka ayay Chile u muuqatay inay ciyaarta gacanta ku qabtay iyada oo fursado badan abuurtay balse fursadahan ayaan halis badan ku abuurin goolhayaha Argentina ee Romero.Laakiin Alexis Sanchez ayaa ku sigtay inuu daqiiqadii 83 aad ku sigtay inuu indhaha xado kadib markii uu kubbad halis ah ku darbeeyay goolka Romero uu ilaalinayay laakiin kubbada ayaa wax yar birta u martay.
Laakiin Argentina ayaa inta badan u muuqatay inay khibrad ku ciyaaraysay iyada oo doonaysay inay ciyaarta si aan xamaasada badan lahayn ku ciyaarto isla markaana waxa ay raadinaysay xal ay farsamo ku heli karto.Argentina ayaa daqiiadii 90 aad heshay rekoodhe kadib markii uu Silva qalad ku galay Rojo laakiin garsooraha ayaan waxba tilmaamin.
Markale ayay Argentina la iman gaadhay goolka guusha intii lagu jiray dhamaadka 2 daqiiqo oo ciyaarta lagu daray Lionel Messi ayaa kubbada wadano xanuun ah la soo baxsaday wuxuuna meel banaan ah oo xerada ganaaxa Chile ah udhigay Lavezzi kaas oo isaguna kubbada goolka soo hormariyay laakiin Higuain ayaa fursadii qarniga dayacay.Fursadan aya ahayd mid ay Argentina koobka ku qaadi lahayd oo gool cadaan ah loo fishay.Laakiin ugu danbayn waqtigii rasmiga ahaa ee ciyaarta ayaa ku dhamaaday barbaro gool la’aan ah waxaana ciyaarta lagu daray 30 daqiiqo oo dheeri ah.
Waqtiga Dheeriga Ah:-
Koox kasta ayaa maanka ku haysay inay dadaal fiican samaysay isla markaana ay 30 daqiiqo u baahan tahay inay dadaalkeeda sii laba jibaarto, sidaa daraadeed ciyaartu waxay markale ahayd mid markale laba jibaar u adkaatay.Mascherano ayaa sameeyay qalad aan caadi ahayn isaga oo hadiyad siiyay Sanchez oo aanu wax difaac ahi ka horayn, laakiin Sanchez ayaa kubbada la daahay taas oo keentay in difaaca Argentina culayska soo saaro, Sanchez ayaana isaga oo goolka hortaagan kubbada cirka u u diray. fursadan ayaa ahayd mid ay yarayd in ciyaarta la helo.
Tobankii daqiiqo ee waqtiga dheeriga ah ugu danbeeyay ayay ciyaartu gashay xaalad waali ah oo ay kubbadu ka dhaxaysay labada gool iyada oo fursado badan ay labada kooxood abuurayeen.Inta badan ciyaarta Chile ayaa ahayd kooxda kubbad ahaan gacanta sare lahayd laakiin fursadahooda ayaan ahayn ku aan u badnayn sida ay kubbada u haysteen.Ugu danbayn waqti dheeriga ahaa ayaa isaguna ku dhamaaday babaro gool la’aan ah taas oo keentay in gool ku laad labada xul qaran lagu kala saaro.
Chile ayaana rekoodhaha ugu horeeyay tuuratay iyada oo M. Fernández uu rekoodhihiisa gool u sarifay, waxaana Argentina markiisa u qaatay Lionel Messi kaas oo isaguna si fiican udhaliyay rekoodhaha Argentina ugu horeeyay. Rekoodhaha labaad ayuu Chile u laaday Arturo Vidal kaas oo si qurux badan kubbada shabaqa u dhex dhigay laakiin G. Higuaín ayaa Argentina ka qasaariyay rekoodhaha labaad isaga oo kubbada garoonkaba ka saari gaadhay.Nasiib daradii Higuain ayaana halkeeda ka sii socotay isaga oo intii ay ciyaartu socotayna fursad dahabi ah qasaariyay.
C. Aránguiz ayaa Chile rekoodha saddexaad u qaatay wuxuuna markiisa si fiican udhaliyay rekoodhihiisa laakiin markale ayuu Argentina jab soo gaadhay kadib markii uu goolhaye Bravo rekoodhe ka badbaadiyay É. Banega. Alexis Sanchez ayaana qaatay rekoodha ah Chile guusha ku gaadhaysay wuxuuna gool ku laagiisa udhaliyay qaab qurux badan isaga oo rekoodhayaashana ka dhigay 4:1 ay Chile ku qaatay Copa America. waa markii labaad oo ay Argentina muddo sanad ah finalka koob muhiim ah guuldaro la kulanto